မူလနရော » その他
Updated: 2016-09-29 13:56
ဘွန်းဂေါတာကဒ ( ရှောဝ ခောတ်မြို့ )
ဘွန်းဂေါတာဂတ မြို့ ( ရှောဝ ခောတ် မြို့ကလေး ) ။ဂျပန် နိုင်ငံ ရဲ့ ခောတ် တွေ ဖြစ်တဲ့ အထဲ ၁၉၅၅ ခုနှစ် ရှောဝ ခောတ် က ထင်ပေါ်ကြားကြား ပြီး ၄င်း ပုံစံအတိုင်း ထို မြို့ က အရောင်း ဆိုင် များ ကို ပြန်လည် အသက် သွ...
Updated: 2016-09-01 16:23
ကျူးရှူး အိုရုရဲ ( တော လမ်းလေး )
အိုရုရဲ ဆို တာကတော့ တောင် ကိုရီးယား နိုင် ငံ ဂျယ်ဂျူး ကျွန်းကနေအစပြု ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဂျယ်ဂျူး စကား နဲ့ ဆို ရင် ( သွားလို့ ရတဲ့ အိမ် နဲ့ ဆက် နေတဲ့ လမ်းလေး လို့ အဓိပ္ပါယ် ရပါတယ်။ အဲ့ဒီ ကနေ ဒီ ဖက် ခောတ် ထရပ...
Updated: 2016-08-24 18:03
မြေအောက်ရေအနက်၂၅၀မီတာမှ၃၀၀မီတာမှထွက်ရှိနေတဲ့အခိုးအငွေ့တစ်ထောင်းထောင်းနဲ့ ရေပူစမ်းများကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျမြင်တွေ့နိုင်တဲ့ငရဲပြည်ခရီးလို့ ခေါ်တွင်တဲ့နေရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၉ ၈ဒီဂရီလောက်ထိပူပြီးစိမ်းပြာ...
Updated: 2016-08-08 15:48
ဖုခုအိုက ရဲ့ ဟာကတာမှာ သင်္ဘောလေး စီး မလား Hakata Bay Night Cruise
ညပိုင်း မှာ ထွက် တဲ့ Cruising plan ။ ၁ နာ ရီ စာ ဖြစ်ပြီး Canal City Hakata, Hakata Bayside Place, Fukuoka Yafuoku Dome, Fukuoka Tower အစရှိ တဲ့ နာမည် ကြီး နေရာ တို့ ကို မြင် တွေ့ နိုင် တဲ့ အ...
Updated: 2016-08-02 16:57
ရာနဂ၀ ခါဝ ခုဒရိ ( 柳川の川下り) အပျော် စီးလှေ
ဆူအိဂေါ မြို့ ရဲ့ ရာနဂ၀ မြစ် မှာ ၊ ခါဝခုဒရိ က နာမည် ကြီး ပါတယ်။ မြစ် လို့ ပြောပေမယ့် စီး ဆင်း နေတဲ့ မြစ် မဟုတ် ပဲနဲ့ တူးမြောင်း တစ် ခု ဖြစ် ပြီး ( ဒွန်းကို ဖုနဲ ) လို့ခေါ်တဲ့ လှေကလေး နဲ့ အတူ လှေသူကြိး...
Updated: 2016-08-02 16:38
နနစွတ် ဂါမ လေ့လာရေးသင်္ဘော ( လှိုင် ၇ပေါက် လေ့လာရေး သင်္ဘော)
ရော်ဘုကို ကမ်းရိုးတမ်း ကနေ စတင် ထွက် ခွာမဲ့ ( အီကမရု အမည်ရှိ သင်္ဘော ) ဟာ မြို့ ရဲ့ အရှေ့ ဖက်စူးစူးမှာ ရှိ တဲ့ ( နနစွတ် ဂမ ) လှိုဏ် ဂူ ၇ ပေါက် ကို ဦး တည် ကာ ထွက် ခွာ မယ့် လေ့လာရေး အပျော်စီးသင်္ဘော ပဲဖြစ...
Updated: 2016-08-01 13:35
Keya beaches ( ခဲရ ပင်လယ် ကမ်းခြေ )
ခဲရ ပင်လယ်ကမ်းခြေ ၊ ကမ်းခြေ က ရေ ဟာ အလွန် ကြည်လင်နေပြီး ၊ သဲခုံ ၊သောင် များ ပေါများသော ကမ်းခြေ ဖြစ် တဲ့ အတွက် မိသား စု နဲ့ အတူ သွားရောက် အပမ်း ဖြေနိုင် တဲ့ လုံခြုံ စိတ်ချ ရတဲ့ ကမ်း...
Updated: 2016-07-07 15:18
ခဲရဒိုင်းမွန်း ရှူးယု အပျော်စီး သဘောင်္
နိုင်ငံတော် ရဲ့ သဘာဝ အမှတ်တရ နေရာ တစ် ခု အဖြစ်သတ် မှတ် ထား ခြင်း ခံ ထား ရတဲ့ အိတိုရှိမား မြို့ မှာ ရှိ သော လှိုဏ်ဂူ ( ခဲရ ဒိုင်းမွန်း ) ကို လှည့်လည် ကြည့်ရှု လို့ ရပါတယ်။ (ခဲရ ဒိုင်းမွန်း ) ဟာ ဂျပ...